Published : August 16, 2010 | Author : कोरङ्गी प्रेम
Category : Memoir / संस्मरण | Views : 1123 | Rating :
आज बिदाको दिन बिहान भरी सुत्नु पर्ने । दिनै भरी यता पल्टी उता पल्टी तन्की तन्की सुत्नु पर्ने । चौरासी ब्यन्जन परिकारसँग सोमरस अनि यस्तै यस्तै अन्य रसहरूसँग लठ्ठ लठ्ठीएर बिस्तारामा पल्टीनु पर्ने । अनि २-४ दिन अघि देखिनै कोलबीरे, म्यारिज र बिबिक्यूको आयोजना गरी साँप्रा, पखेटा र करङहरू चपाउँदै हाक्पारे भाकामा रम्नु पर्ने, झुम्नु पर्ने र अलिअलि प्वाँख हाल्दै गरेकी सानी बचेरी छोरी श्रेयालाई गुँडबाट निकालेर बजार, पार्क र मामाघर तिर घुमाउन लानु पर्ने दिन । तर त्यसरी बित्दैन मेरो बिदाको दिन । जस्को कथा अर्कै छ अलि चर्कै छ जुन रिठ्ठो नबिराई बेली बिस्तार लगाउँछु ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
अगष्ट २ तारिख सोमबार बिहान "कुखुरी काँ" गर्दै भाले बास्यो जोडदारले । यो भाले कत्रो छ ? कस्तो छ ? बिकासे हो की घरासे ? ठिम्मर के हो ? केही अत्तोपत्तो छैन । यस्लाई दाना पानी चारो केही पनि हालीरहनु पर्दैन । एक डेढ बर्ष पहिले ईन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो पनि सित्तैमा । सायद एक डेढ बर्षको ठूलै भएर होला गतिलै बास्छ पड्के । यसलाई मार्न न धामी झाँक्री न बिजुवा फेदाङ्गमा न त भक्भकी उमालेको पानी नै चाहिन्छ न त चित्लाङ्गको सिरुपातेकै इन्तुजाम गर्नु पर्छ, केही चाहिंदैन । मोवाईलको अफ लेखेको ठाउँमा थिची दियो वस् काउतीम (खतम) । हस्याङ् फस्याङ् गर्दै बुढो वाहुन पुजारी बाजे जस्तै लङ्गौटी बेरेर वाथरुम छिरें । पाँचै मिनेटमा ज्यान पखाली मलमुत्र त्याग गरेर दाँत समेत मोली भ्याएँ । हरेक दिन मेलो (ड्यूटी) जानु अघि यसरी नै शरीर पखाल्ने आदत बसेको छ मलाई जस्ले दिनभरी शरीरलाई फूर्तिलो बनाउँछ । मेरो नुहाई बाजेको भन्दा खासै गतिलो थिएन । होस पनि कसरी ? जाबो पाँचै मिनेटमा मेन्जो (थोरै) ।
छोरी श्रेया सन् २००८ फेब्रुवरीमा जन्मेकी हुन् । तिनलाई हुर्काउन बढाउन पर्दाको हैरानी भनी साध्य छैन । महिनाको चोख्खो ५ हजार हङकङ डलर नेपाली करिव ५० हजार । बजेट छुट्ट्याउनु पर्छ र मात्र बल्लतल्ल महिना उम्कन्छ । आज देख्दैछु तोरीको फूल । हाम्रा बाबु बाजेले कसरी हुर्काए होलान त्यत्राबिदी गोठहरू ५-७ जना सम्म । अहिले म सोँच्दैछु । छोरी श्रेयाको हेरचाह गर्न सन २००८ मा पहिलो पटक डोमेस्टीक झिकाएँ सिक्कीमबाट । आउँदो नोभेम्बरमा भिसा सकिएर फर्किंदै छिन् तिनी । त्यसैले अर्को कामदार आवेदन गर्न आवश्यक कागजातहरूको पोको बोकी लागे सेन्ट्रलको एमटिआर एक्जिट जे तिर आदरणिय दाई सल बहादुर कोरङ्गीलाई भेट्न । हङकङमा यतिका धेरै एक्जिटहरू भएको एमटिआर स्टेशन सेन्ट्रलमा मात्रै छ अन्त कतै छैन । जुन दिन नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुँदै थियो । त्यो पनि तेश्रो पटक श्रावण ५, ७ र १७ गते । आफ्नो देशको बारेमा बेखबर भएर बस्नु हुँदैन र देशलाई सहि दिशातिर लैजानको निम्ती नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरू, राजनैतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरू अनि निती निर्माताहरूलाई संसारका जुनसुकै
कुनामा बसेका नेपालीहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो ठम्याई हो । अतः आफ्नो देशको बारेमा जानकारी सबैले राख्नु पर्दछ । त्यसैले मलाई प्रधानमन्त्री को बन्ने हो भन्ने चासो बढी रहेको थियो । मसँग प्रिन्टर नभएकोले इमीग्रेशनलाई लेखेको चिठ्ठी दाईलाई ल्याईदिनुस् भनेको थिएँ । त्यसैले हाम्रो भेट अनिवार्य थियो । त्यही बाटो भएर उहाँ सधैं आफ्नो मेलो (ड्यूटी) जानु हुन्थ्यो । सन् २००५ मा "संखुवासभा समाज हङकङ"को अध्यक्ष बनेर समाजको कोष जम्मा गर्ने काममा उल्लेखनीय योगदान गरेकोले सबै जिल्लावासीहरूको मन जितेका छन् बुढाले । त्यसैले सबैले मान्छन् बुढालाई । बल्ल बल्ल ८:४० तिर बुढाको सवारी भो । बुढालाई नमस्कारपाती चढाएर चिठ्ठी लिएँ र आवेदन फारममा २ जना साक्षी चाहिंदो रहेछ त्यसैले उहाँलाई साक्षी पनि राखि भ्याएँ । ९ बज्न आटेकोले दाईसँग बिदा भएर लागे एडमीरल्टी तिर जहाँ भारतीय दुतावास छ । एक्जीट डी बाट बाहिर निस्कदै यूनाईटेड सेन्टरको दोश्रो तलामा चढी फोटोकपी खोजें । देबे्र साईडमा एक बैंस ओरालो लाग्दै गरेकी एक युवती "वान डलर वान पिस" भन्दै गरेको सुने र त्यही फोटोकपी गरी २६ तला पुगे जहाँ भारतीय दुतावास छ । १ ईण्डीयन र २ जना चिनीया बुढीहरू अघि नै लाईनमा थिए । कार्यालय समय ९:३० बजे देखि १२ बजे सम्म रहेछ । त्यसैले १५-२० मिनेट कुराई मच्चियो । फेरी तल ��"र्लिएँ २ तलामा । साढे नौ बज्यो माथि चढें । कार्यालय खुलीसके छ । १२-१५ जना थिए लाईनमा । हामी सबै भित्र छिर्यौ । भित्तामा ठूला ठूला मेटलको अक्षरमा "भारतका प्रधान कोंसलावास" र अंग्रेजीमा "कन्सुलेट जनरल अफ ईण्डीया" लेखिएको थियो । ५ जना पछि मेरो पालो आयो । काउण्टरमा आवेदन फारम टक्र्याएँ । कतै केही अपुग हुने पो होकी भनेर मन ढुकढुक गररिहेथ्यो । त्यो अर्ध बैंसेले सरर नजर फाल्दै फायल हे-यो र भन्यो "तुम पेहेले बार पेश कर रहे हो" ? ३ वटा कन्ट्रयाक्ट पेपर देखाउँदै ��"र एक चाहिए" भन्यो "मैं देखता हुँ" भन्दै इमिग्रेसन तिर टाप कसें । मैले भरेको फारम जम्मा ३ वटा मात्रै हो । मैले यस्तो काम गरेको पहिलो चोटि हो । ४ वटा फारम हुन्छ ,यति पैसा लाग्छ, भनेर कसैले पनि भनेनन् र मैले पनि सोधिनँ । २ वर्ष पहिले पहिलो डोमेस्टीकको आवेदन फारम आफैं भर्दा धेरै फारमहरू बिग्रीएर डस्वीन मोटाएको (भरीएको) थियो । फारम बुझाउन जाँदा पाँचै मिनेट ढिला भएर निकै सास्ती पाएको थिएँ । जागीरबाट घरीघरी बिदा नपाइने अनि अर्कोतिर भरे, भोलि, एक छिन भनेर धर नपाइने । त्यसैले १२-१४ घण्टा टाउको जोतेर बचेको अलिअलि दिमाग पनि त्यो टेण्सनले खाँदा घरमा निकै रस्साकस्सी परेको थियो र त्यो काम वकिललाई जिम्मा लगाउँदा २५सय हङकङ डलरले नराम्ररी दुःख पाएको थियो । ३ महिना पछि इमिग्रेशनले कृपा गरेर भिसा त दियो तर बिडम्बना त्यो वकिल भनौदाले न हामीलाई कन्ट्र्रक्याक्ट पेपर दियो न त हामीले डोमेस्टीकलाई नै । त्यसैले त्यो पेपरको अभावमा पहिलो डोमेस्टीकले घरीघरी मेरो दिमाग चाटि रह्यो । बैंकमा खाता खोल्न, मोबाईलको लाईन लिन आदि विविध काममा आवश्यक पर्दो रहेछ त्यो पेपर । त्यसैले यो पटक २५ सय हङकङ डलर शहिद बनाउन मनले मानेन र आफै दौडिएँ । अपिस टाइम भएकोले मानिसहरूको दोहोरीलत्त थियो । एमटीआरबाट एक हुल ह्वार्र निस्कन्छन् अनि अर्को तिर छिरी जान्छन् । बाटोमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन । १० बज्नलाई ५-७ मिनेट बाँकी हुँदो हो बल्ल इमिग्रेशन पुगें । विद्यार्थी जीवनमा एउटा लेख पढेको थिएँ "होस्टीलीटी" जस्मा एउटा मानिस अति हतारमा हुन्छ । ऊ बस चढ्छ जाममा फस्छ । ओर्लेर हिड्छ बाटो भरी मान्छेको भीडले हिड्ने ठावै पाउँदैन त्यसैले उ भन्छ "यी गाडीहरू सबै मेरा शत्रु हुन् । मेरै अवरोधका लागि सडकमा जाम भएर तेर्सिएका छन् । अनि सडकका मानिसहरू सबै मेरा दुश्मन हुन् । सबै मेरा बिरुद्घमा खनिएका छन् । त्यसैले मलाई समाप्त पार्न मैदानमा उत्रेका छन्" मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्यो । कन्सुलेटको कर्मचारी, एमटीआरमा हिड्ने मानिसहरू अनि ईमिग्रेशनको त्यो लाईन सबै मेरै बिरुद्घमा खनिएर मलाई खुच्चिङ् भनेर खिज्याई रहे झैं लाग्यो । स्वाँस्वाँ र फ्वाँफ्वाँ गर्दै १०:१५ मा इमिग्रेशन पुगें । इमिग्रेशनको दोश्रो तला सोधपुछ र फारम पाईने ठाउँ हो । त्यसै तलाको पछि फर्केर दायाँपट्टी साईडमा फाराम र अन्य कागजातहरूको बिस्कुन लगाएँ । एक्सक्यूज मी भन्दै अग्लीन बिर्सेकी फैलीन जानेकी (मोटी) १ फिलीपीन युवती पनि मेरै आडमा विस्कुन लगाउन आईपुगी । त्यो आगमनलाई एउटा मिठो संयोग मान्दै घरीघरी तिनी प्रति गिद्दे दृश्टि फाल्दै हतार हतार फारम भर्न थालें । ४ वटा कन्ट्रयाक्ट पेपर र २ वटा आवेदन फारम भर्दा ११ बजी सकेछ । फेरी हतार हतार त्यो बिस्कुन उठाएर लागे ईण्डीयन कन्सुलेट एडमीरल्टी तर्फ । जहाँ पुग्दा मात्रै आधा घण्टा बाँकि थियो अफिस बन्द हुनलाई । लाईनमा ५-१० जना थिए । कसै कसैले काउण्टरमा फाट्टफुट्ट सोधपुछ गर्दै थिए । कन्ट्रयाक्ट पेपरमा छाप लगाउँदा पैसा लाग्छ कि सोधीहालौं भनेर काउण्टरमा सोधें । १६० डलर लाग्छ भन्यो पछि फेरी मेरो सातोपुत्लो उँड्यो । २५ मिनेट मात्रै थियो अफिस बन्द हुनलाई । हे भगवान भन्दै दौडिए एमटीआर तिर । मेरो खल्तीमा प्राय: त्यती दाम हुँदैन, चिल्लै हुन्छ । बोकी हाले भने पनि १ सय डलर सम्म हुन्छ नत्र अक्टोपसबाटै काम चलाउँछु । हतार हतार बैंकबाट २ सय झिकेर दौडिए कन्सुलेट तर्फ । जम्मा १५ मिनेट मात्र बाँकी थियो बन्द हुन । मेरो अगाडि एक जोडी ईण्डीयन थिए खुबै अँग्रेजीमा कुरा गरीरहेका । पछाडि चाहिँ २ जना नेपाली मित्रहरू भएका तिनका शारीरिक मोहडा र चेहराले प्रष्टै बताईरहेको थियो । ईण्डीयन जोडीको केटो चाहिँ अलि झुत्रे झाम्रे तर हात र झोलाभरी किताबका ठेलीहरू बोकेका थिए भने केटी चाहिँ त्यती खोट लाईहाल्नु पर्ने खालकी थिईनन् मोरी । बिस्तारै १२ बज्यो ढोका बन्द ग-यो । म चाहिँ आरामले छिरें पछिका २ नेपाली मित्रहरू चाहिँ ढोकाले च्यापिंदै छिरे । धन्य छ प्रभु भन्दै ढुक्क भएँ । बिस्तारै मेरो पालो आयो । १६० बुझाएर बाँकी कागजातहरू इमीग्रेशनमा बुझाउने सुर कस्दै थिएँ तैपनि सोधी हालौं कन्ट्रयाक्ट पेपर आफैले लाने होकी यहीबाट लगिन्छ भनेर काउण्टरमा रहेकी एक बृदा महिला कर्मचारीलाई सोधेँ । भारी मनले ति महिलाले "उस्से पुछो" भन्दै छेवैको अर्धबैंसेलाई देखायो । "कल मिलेगा कन्ट्र्रयाक्ट पेपर तुम खुद लाना पडेगा । कल पाँच बजे आना" भनी जवाफ दियो "थ्याङक्यू" भन्दै बिदा भएँ । मैले त सोचेको थिए कन्ट्रयाक्ट पेपर एकै छिनमा छाप लगाई दिन्छ बिना दस्तुर अनि जसरी "चरीले चुच्चो भरी चारो च्यापेर आफ्नो बच्चालाई खुवाउन गुँडतिर दौडिन्छ" त्यसैगरी म पनि त्यो कागजातको पोको बोकेर ईमिग्रेशन दौडौंला भन्ठानेको थिएँ । तर कन्ट्रयाक्ट पेपर त भोलिपल्ट मात्रै दिंदा रहेछ । बिना पैसा कसैले काम गरिदिन्छ ? यति महंगो शहरमा म पनि कस्तो बुद्धु।
अब म लागें एबर्डिन तिर जहाँ कन्सट्र्रक्सन वर्कस रजिस्ट्रेसन अफिस छ । वानचाईको सदन प्लेग्राउण्डको अगाडि ४ बी नम्बरको मिनीवस लाग्छ भाडा ७ डलर । जुलाई ५ तारिख मैले सिटा कार्ड दर्ता गराएको थिएँ १०० डलर तिरेर । त्यहाँ १ महिला रहिछिन् । नाम मिस लाम । कार्ड लिन हङकङको स्थायी परिचय पत्र नहुनेले पासपोर्ट अनिवार्य बोक्नु पर्ने रहेछ तर मैले त्यो पनि बिर्सिएछु त्यो बिना पनि मेरो काम फत्ते गरिदिईन तिन्ले । अनि २० तारिख पछि कार्ड लिन आउनु भनि २-३ पटक भ्वाइस मेल पनि तिनैले छाडेकी थिइन् । म पौने २ बजे तिर पगेछु । अफिस बन्द थियो । म माथिल्लो तलामा रहेको ट्वाइलेट छिरें । त्यहाँ गरिने धन्दा सकेपछि एक नजर माथिल्लो तलामा के मात्र फालेको थिएँ क्यानटिन देखें । हुम्काई सेक्फान भन्दै सोधेको त त्यो चिनाले आई गिभ यू राईस चिकेन एण्ड भेजीटेबल ��"के भन्यो । हाउ मछी भनि सोधें "सिक्स्टी" भन्यो । म झस्किएं । जाबो १ छाक भातलाई ६० डलर । ६० डलरले त मेरो गुँडका अर्धाङ्गीनी र सानी बचेरी छोरीलाई समेत १ छाक चारो पुग्थ्यो । म स्पष्ट हुनलाई चाईनिजमा सोधें "लोक सप" ६० "म्या होईन सप लोक" १६ भन्यो ��"के ��"के भन्दै टेबलमा बसें । उनले सिक्स्टिन भनेको रहेछ । यीनीहरूको उच्चारण सिक्स्टी र सिक्स्टीन उस्तै उस्तै सुनिन्छ । मलाई पुलुक्क हेर्दै ल्पेटमा भात राम्रैसँग लगायो सायद निकै खान्छ भन्ने ठान्यो होला । भोकलाई खिर भने झैं मासु भात अनि साग दिनको २ बजे तिर बस् के चाहियो त्यो भन्दा । चम्चा लिएर बसेको ५-१० मिनेटमा २-४ वटा सागको डाँख्ला भन्दा अरु केहीको नामोनिसाना रहेन । आजकल मलाई भैरव जागेको छ । त्यसैले २ जना सम्मको भात काउतिम गर्न (सक्न) कसैलाई गुहारीरहनु पर्दैन । म्याट्रीक पास गरेर काठमाण्डौ तिर क्याम्पसमा सिङ्गौरी खेल्दै हिंड्दा ४८-४९ साल तिर म सानोठिमी क्यामपस भक्तपुरको छात्रवासमा बस्थें । हामी जम्मा ९० जना बस्थ्यौ त्यहाँ । त्यतीका जनामा धेरै भात खानेहरूमा म टप फाईभ भित्र आरामले पर्दथें । सायद त्यसैको करामत जागेकोले घ्याम्पे भुँडी तिर पो प्रमोसन हुन खोज्दै छ तर दाना पानीको अभावले हाललाई त्यो प्रमोसन रोकिएको छ । संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, खोटाङ, धनकुटा आदि पुर्वका सबै जिल्लाहरू र हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, बैतडी आदि जिल्लाका विधार्थीहरू बस्दथ्यौं त्यहाँ । सबैभन्दा रमाईलो पक्ष त पढाई सकेर छुटिने बेलामा पुर्वका भए धाननाच (पालम) र पश्चिमका भए देऊडा गीत गाएर त्यो क्याम्पस र छात्रवास परिसर जुरुक्कै उचाल्थ्यौं । वरिपरिका ज्यापुहरू चाहि लाटाले पापा हेरे झैं क्वार क्वारती हेर्थे । आजकल ति बिगतलाई संझेर भावुक बन्छु । चिनीयाहरूको खानामा चिल्लो पिरो कम हुन्छ । हरेक छाकमा माछा मासु सागपात हुन्छ । लाउन र खानमा यिनीरुले बिशेष ध्यान दिएका कारणले विश्वमै चाइनिज, जापानिज र कोरियनहरू सबै भन्दा बढी बाँच्दछन् । हामी चाही बिहान बेलुकी मर्ने गरी बजायो अनि दिउँसो भेटे बजायो नत्र चिल्लै । मैले एउटी चिना बुढीलाई सोधेको थिएँ । तिम्रा कति जोर जुत्ता छन ? भनेर । २० जोर भनीन् । अनि हरेक जोरमा मिल्ने पहिरन । किन यत्तिका धेरै भन्दा हरेक दिन फेरेर लगाउनु पर्छ भन्थे । एउटै पोशाक २-३ दिन लगाए यो घर गएन छ भनेर भन्दारैछन् अरुले । तर हामी चाहि २-३ बर्ष नफाटुन्जेल लगाई रहन्छौं । यो हाम्रो गरीबीको पराकाष्ठ हो । खाना खाई सकेर ६ तलामा कार्ड लिन झरें । मिस लामले कार्ड तयार भो भनिन् र अर्को कर्मचारीले यहाँ सहि गर्नुस् भन्दै ७ डलर दियो । मैले मलाई ? भनेर सोधें जवाफमा हो भन्यो । किन भन्दै २-४ चोटि खेरें १२-१४ घण्टा टाउको जोतेर अलि अलि बाँकि रहेको त्यो दिमागले के भेऊ पाउनु । तातो न भुत्लो । केही मेसो पाए त मरी जाऊँ । अन्तमा ओके ओके भन्दै त्यो ७ डलरलाई खल्तीमा बिराजमान गराएँ र वाई वाई भन्दै वानचाई स्थित रीभिनो टावर तिर हानिएँ जहाँ ट्याक्सको फारम भरेर खसाल्नु थियो । मैले १ सालमा कमाएको करिब डेढलाख हङकङ डलर । नेपालीमा हिसाब गर्दा झण्डै डेढ करोड अनि मेरी अधाङ्गीनीले १ लाख, झण्डै एक करोड । दुबै जनाको कमाईको योगफल करिव अढाई करोड नेपाली रुपैयाँ तर सधै हरि टट्टु । कहिल्यै हाम्रो भान्सामा उज्यालो भएन । संधै जोगी भात । औंसी पूर्णेमा कहिलेकाहि २-४ चोक्टा चिची झुल्कीन्छ, त्यो पनि मरेर । नत्र रेष्टुरेण्ट वार नै गईयो । नयाँ नयाँ कपडा लगाउने त कुरै छाडौं संधै टाउको जोत्दैमा फुर्सद छैन कहाँ जाँदा लगाउनु । कतिन्जेल यस्तो हरिबिजोग भएर बस्ने । हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई हङकङको जीवन धेरै कठिन छ । एक मनले सोचें स्वदेश फर्कौं । ढिडो रोटो खाएर भए पनि एउटा स्वाभिमानी नेपाली बनी यो श्रम र सिपलाई नेपाली माटोमा खन्याआऔं । तर स्वदेशको स्थिती झनै चर्को छ । त्यहाँ त आफन्त नातागोताहरू ठुला बडा हुनु पर्छ । पहुँचवाला हुनु पर्छ । तीनै पहुँचवालाले आफ्नै "कोठेवारीमा पाकेको केरा बाँडेर खाए" जस्तै राज्यका हरेक क्षेत्रमा आफन्त नातागोताहरूलाई जागीर खुवाउँछन् । आफ्नो त त्यो स्थिती पनि छैन । एक मनले सोचें कमसे कम हामी बिदेशीएर हाम्रो परिवारलाई सरकारले पाल्नु पर्ने भार त कम भएको छ फेरी किन सरकारकको निम्ति बोझ बन्ने ? यिनै तर्कनाहरू मनमा खेलाउँदै त्यो ट्याक्सको चिठ्ठि खसालेर गुँडमा पुग्दा ४ बजिसके छ । गुँडमा सानी बचेरी (छोरी श्रेया) माउको (मेरो) प्रतिक्षामा ब्यग्रताका साथ कुरीरहेकी थिईन् । तिन्लाई च्याप्प कोखिलामा च्यापेर विस्तरामा पल्टेको खै कति बेला भुसुक्कै गएछु ८ बजे वहिनीले खाना खान उठ्नुस भन्दा पो ब्यूँझिए छु ।
अगष्ट ३ श्रावण १८ गते २०६७
कसैलाई हार्नमा मज्जा
कसैलाई हराउनमा मज्जा
अनि कसैलाई हार्ने र हराउनेको
गाली र तालीको खेल हेर्ने मज्जा,
विडम्वना, नत हार्नेको अनुहारमा विष्मात
नत जित्ने अनुहारमा उल्लास